Jamaahiirta Arsenal Oo Ku Kaftamay In Xhaka Uu U Qalmo Ballon D'Or Ka Dib Markii Xog Ku Saabsan Qaab Ciyaareedkiisa Ay Soo Baxday | Laacib.net
Jamaahiirta Arsenal Oo Ku Kaftamay In Xhaka Uu U Qalmo Ballon d’Or Ka Dib Markii Xog Ku Saabsan Qaab Ciyaareedkiisa Ay Soo Baxday
September 12, 2019 Balaleti Comments Off on Jamaahiirta Arsenal Oo Ku Kaftamay In Xhaka Uu U Qalmo Ballon d’Or Ka Dib Markii Xog Ku Saabsan Qaab Ciyaareedkiisa Ay Soo Baxday
Taageerayaasha kooxda Arsenal ayaa ku maadeystay Granit Xhaka ka dib markii ay Sky Sports shaacisay xog ku saabsan qaab ciyaareedka xiddiga khadka dhexe.
Bogga bulshada ee Reddit ayay taageerayaasha Gunners uga hadleen xiddigooda khadka dhexe iyagoo ciwaan ka dhigtay: “Wax walba ayuu kaalinta koowaad uga jiraa. Ugu yaraan wuxuu u qalmaa inuu u tartamo Ballon d’Or.” waxaana si weyn loo gorfeeyay labadii xilli ciyaareed ee ugu danbeysay ee xiddiga Switzerland.
Xhaka oo 26 sanno jir ah ayaa hogaaminaya liiska xiddiga ugu qaladaadka badan, calaamada badan, gambiska ugu badan lagu maray, taakalada ugu badan ku guuldareystay ee kooxda Arsenal ee tan iyo bilowgii xilli ciyaareedkii 2017-18.
Tan iyo waqtigaas waxaa laga digay 67 qalad, taasoo ka dhigay xiddiga kaalinta koowaad uga jira qaladaadka ee Arsenal. Waxaa la siiyay 13 calaamad, ma jiro ciyaaryahan Arsenal ah oo kaarar intaas la eg qaatay mudadaas.
47 jeer ayaa kubad lala garab maray halka uu 24 jeer ku guuldareystay taakal uu sameeyay.
RIix Halkaan Si Aad U Akhriso: Waa Kuwan AFARTA Daafac Dhexe Ee Uu Pep Guardiola Midkood Lasoo Saxeexan Karo January Si Uu Tartanka Horyaalka Ula Galo Liverpool.
Qaar ka mid ah taageerayaasha Gunners ayaana difaacay xiddigooda khadka dhexe, halka kuwa badan ay ku maadeysteen.
Taageere ayaa si kajan ah u yiri: “Waa ciyaaryahan aad u degan.”
Mid kale ayaa soo qoray: “Muuqaalka wajigiisa ee sawirka waa midka aan sameeyo marka uu rigoore galo.”
Taageerayaal ayaa iyagana ku baaqay in Xhaka uu yahay xiddig fiican madaama uu ogolaansho ka helay labo tababare Unai Emery iyo Arsene Wenger.
Taageere ayaa ku dooday: “Eeg, dhamaanteen waan ognahay meelaha uu u liito. Si kastaab waxaa jira meelo uu ku xoogan yahay oo ay arkeen Wenger iyo Emery.
“Waxaan aaminayaa qiimeyntooda marka loo eego kuwaan isku dayaya inay maad sameeyaan. Samaan iyo xumaan waa kabtanka kooxda waqtigaan. Waa inaan taageerno.”
Arsenal ayaa Axada wajaheysa kooxda Watford iyadoo dooda ku saabsan xiddiga khadka dhexe ay sii socon doonto.